मलेसियामा भेटियो कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’, जोखिममा नेपाली श्रमिक - ramechhapkhabar.com
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ मलेसियामा पनि फेला परेको छ । त्यहाँका स्वास्थ्यमन्त्री खैरी जमालुद्दीनले शुक्रबार दक्षिण अफ्रिकाबाट नोभेम्बर १९ मा मलेसिया आएका विदेशी नागरिकमा नयाँ भेरियन्टको संक्रमण भेटिएको बताएका हुन्।
संक्रमित व्यक्ति फेला परे पनि कुन देशका नागरिक हुन् भन्ने विषयमा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छैन । रोजगारका शिलशिलामा काम गर्न पुगको नेपाली श्रमिकहरु भने नयाँ भेरियन्टको जोखिममा परेका छन् । हाल मलेसियामा कम्तिमा ४ लाख नेपाली श्रम गरिरहेका छन् ।
विश्व स्वास्थय संगठनले कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट खतरनाक रहेको भन्दै सचेत रहन सबै देशलाई अपील गरिसकेको छ । दक्षिण अफ्रिकाबाट सुरु भएको कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट फैलिँदै गएको छ ।
बिदेश बाट फर्किने नेपालीहरु होसियार ! त्रिभुवन विमानस्थलले जारि गर्यो यस्तो सुचना
विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको लागि नेपाल सरकार को त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय ले महत्वपूर्ण सुचना जारि गरेको छ । पछिल्लो समय तस्करहरुले नेपालि यात्रु लक्छित गरेर काचो सुनलाई बालाको आकार दिएर विमानस्थल बाट नेपाल छिराएको छर्लङ्ग जस्तै थियो । यहि कुरालाई मध्यनजर गर्दै मंगलवार एकैचोटी २१ किलो सुन समातेको थियो । सुन समाते सगै त्रिभुवन विमानस्थलले नया सुचना जारि गरेको छ । हेर्नुहोस सुचना
त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै विदेशबाट नेपाल आउने नेपाली यात्रुहरूले प्रचलित कानूनले दिएको सुविधा भन्दा बढी परिमाण र स्वरूपमा आफ्नो साथमा सून तथा सूनका गहना, मोबाईल फोन, ल्यापटप तथा मदिराजन्य पदार्थहरू ल्याउने गरेको र सोउपर कानून बमोजिम कारवाही हुँदा यात्रुहरूले प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पर्याप्त जानकारी नभएको एवम् अन्य अपरिचित व्यक्तिले ललाई फकाई त्यस्ता सामाग्री पठाउने गरेको भनी बयान दिने गरेकोतर्फ यस कार्यालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ।
नेपाल सरकारले भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ९ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७७ जेष्ठ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तु सम्बन्धी आदेश अनुसार नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक विदेशमा गई नेपाल फर्कदा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि उल्लिखित मालवस्तु देहाय बमोजिमको परिमाणमा मात्र भन्सार महसुल छुटमा ल्याउन पाउनेछन् १. व्यक्तिगत प्रयोगको सुनको गहना ५० ग्रामसम्म
५० ग्राम भन्दा थप २०० ग्रामसम्मको सुनका गहनालाई भन्सार महशुल लिई जाँचपास गर्न सकिने, सोभन्दा बढ़ी परिमाणका सुनका गहना ल्याएमा त्यस्तो बढी परिमाण जफत गरिने
१०० ग्रामसम्मलाई भन्सार
. व्यक्तिगत प्रयोगका सुनका गहना बाहेक अन्य जुनसुकै स्वरूपको सुन अधिकतम महशुल लिई जाँचपास गर्न सकिने, सोभन्दा बढी परिमाणको सुन ल्याएमा त्यस्तो बढी परिमाण जफत गरिने